Olivier Giroud maxuu ka yiri Guushii uu gaarsiiyay Chelsea & Xaalada waqtigan ee kooxdiisa?
Sunday, March 24th, 2019 - 10:42:52
Sunday April 15, 2018 - 15:25:03 in Wararka by
Weeraryahanka kooxda Chelsea Olivier Giroud ayaa sheegay in u dhaqaaqidiisa Chelsea bishii Janaayo ay aheyd go’aan sahlan iyadoo Blues ay tahay kooxda ugu fiican England ayuu yiri.
Weeraryahanka Faransiiska ah ayaa ka soo dhaqaaqay caasimadda ka dib lix sanno oo uu joogay Emirates Stadium sababtoo ah wuxuu doonayay inuu koobab ku guuleystay.
Giroud, oo Chelsea ugu soo biiray aduun dhan 18 milyan oo ginni heshiis cusub, ayaa weli ku riyoonaya inuu ku biiro West London, laakiin wuxuu kalsooni ku qabaa inuu go’aankiisa ku dhamaystiri doono kala qaybsanaanta.
"Markii aan fursad u helay inaan ku biiro Chelsea islamarkaana aan joogo Premier League, waa fududahay,” ayuu u sheegay The Sun. "Bogga Arsenal waa dhammaatay, waana qeyb cusub oo xirfadeyda ciyaareed ah.
"Haatan waxaan ahay 100% diirada saaran Blues iyo inaan gaaro bartilmaameedkeyga, waxaan joogaa kooxdii ugu fiicnayd ee England sanadihii ugu dambeeyay sababtoo ah Chelsea waxay ku guuleysatay koobab ka badan kuwii kale.
"Chelsea waa koox weyn, waxaan dooneynaa inaan ku guuleysano horyaalka sannad kasta, sida iska cad waa tartanka ugu adag sannadkan” – Man City, Liverpool ayaa si fiican u shaqeyneysa, Man United, xittaa Arsenal.
"Taasi waa sababta aan u jecel yahay Premier League, waa horyaalkii ugu fiicnaa, waa adag tahay, waan ahay tartan, sidaasi darteed waxaan rajeyneynaa sanadka soo socda inaan ku tartami doono.”
Kooxda difaacaneysa horyaalka ee Chelsea ayaa ah kooxda shanaad ee Premier League, seddex dhibcood ayeey ka hor Arsenal, ka dib markii ay labada naadi niyad jabeen